Etu esi etinye Instagram na Tik Tok | RoidHub
»Etu esi etinye Instagram na Tik Tok
Etu esi etinye Instagram na Tik Tok
Instagram bụ olulu mbụ maka ọgbọ ahụ ruo mgbe TikTok craze wepụrụ aha ahụ. Know mara na enwere ike ịgbakwunye profaịlụ Instagram na akaụntụ TikTok gị? Ya mere, anyị ga-agwa gị otu esi etinye Instagram na Tik Tok.
Uzo abuo a na-adọrọ uche diri umuaka nke oge a n’enwe uzo di nkpa. Nke ọ bụla nwere njiri mara ya na ike ya. Ọ bụrụ n’ikpebie ịchụ otu maka ndị ọzọ. Enwere ohere mara mma na ị na-atụfu ọtụtụ site na ijighị nke ọzọ.
Etu esi etinye Instagram na Tik Tok?
Etu otu esi ejikọ akaụntụ nke abụọ ma ọ bụ azụmaahịa Instagram na TikTok
Otu esi ejikọ Instagram na TikTok
TikTok bụ nhọrọ aga-eme maka vidiyo mkpanaka dị mkpụmkpụ ma na-adọrọ adọrọ. Obere mkpirisi a dị mkpirikpi na oge na-adị mfe ịmepụta na bulite na ngwa.
Ngwa ahụ na-ebu ụdị ọdịnaya niile ma na-enye gị ohere ị rejoiceụrị ọ anyụ oge ọ bụla site na iji iyi na-enweghị njedebe nke obere obere vidiyo dị ịtụnanya ma na-atọ ọchị. Niile dị ka ụtọ na mmasị gị.
N'agbanyeghị na Instagram bịara na mbụ karịa Tik Tok. Ọ na-agbaso usoro ọgụgụ ihe dị iche iche nke okike na ịkekọrịta ihe. Ya na foto ya dị ịtụnanya na nzacha vidiyo. Ọ bụ ya bụ usoro kachasị mma maka mmepe na ịkekọrịta ọdịnaya.
Ma TikTok naanị ezuola iji mee ka ị na-etinye oge niile. N'agbanyeghị nke ahụ, ndị mmadụ chọrọ inye oge ụfọdụ na Instagram ha. Yabụ ọ bụrụ na gị onwe gị na-ajụ “Kedu ka m ga - esi tinye Instagram m na TikTok m?
Anyị ga-eduru gị na usoro a. Bụrụ ya ekwentị gam akporo gam akporo ma ọ bụ ngwaọrụ gị ma ọ bụ apụl iPhone ị na-ebu. Azịza nke otu esi etinye insta na tik tok dị mfe.
Nwere ike ijikọ ma ngwa. Peoplefọdụ ndị nọ ebe ahụ ejirila ngwa TikTok mepụta akụkọ Instagram yana obere ọnọdụ. Agbanyeghị, ọtụtụ amaghị na eziokwu ahụ enwere ike ijikọ ngwa abụọ a site na ikpo okwu Tik Tok.
Tupu ịmalite ijikọ akaụntụ na ngwa abụọ a. You ga-amararịrị na ha bụ ngwa abụọ dị iche iche nwere ma na-arụ ọrụ nke ụlọ ọrụ dị iche iche. Ndị Facebook nwere Insta nwe ya na Tik Tok bụ ụlọ ọrụ China.
Iji jikọọ Instagram na TikTok, ị ga-etinyerịrị ngwa abụọ a na ekwentị gị. Ebe obu na ino ebe a. Already nwere ike ịnwe akaụntụ abụọ. Ugbu a ị dịla njikere ka ịgabiga ya. Ya mere, nke a bụ otu esi ejikọ Instagram na TikTok.
Ndị a bụ usoro. Mee ha n'usoro enyere gi na ịgaghi anọ na oge.
1 Mepee ngwa Tik Tok wee pịa akara ngosi profaịlụ. Ọ dị na akuku aka nri ala ozugbo ịchọrọ ịmepe ngwa ahụ na ihuenyo ngwaọrụ gị.
2 Ugbu a, pịa na Dezie nhọrọ profaịlụ ozugbo ị gafere nzọụkwụ mbụ.
3 N'ebe a, ị ga - ahụ nhọrọ ịchọrọ ịgbakwunye profaịlụ Instagram na YouTube gị. Kpatụ Tinye Add tab tab.
Ugbu a, a ga-akpọrọ gị gaa nbanye gị Instagram. Dejupụta nzere nke gụnyere nọmba ekwentị gị, aha njirimara, ma ọ bụ email, yana paswọọdụ. Wee pịa taabụ nbanye. A ga-akpọrọ gị gaa na profaịlụ gị site na TikTok.
Ugbu a, pịa “ikike” ka ịhapụ akaụntụ gị ịnweta akaụntụ Insta.
Nke a bụ otu esi etinye insta na tik tok na ekwentị gị. Ugbu a ị nwere ike ịkekọrịta ihe ọkpụkpọ vidiyo gị na ekwentị gị ozugbo iji insta si ngwa TikTok. ọ dịghị mkpa ị gafere ogologo ụzọ ọgbaghara nke ịgbanwee n'etiti ngwa abụọ ahụ.
I nwekwara ike ime nke a. Ndị mmadụ na-anwa ijikọ akaụntụ Instagram ha azụmaahịa ma ọ bụ ihe ndekọ Instagram ha nke abụọ nwere ike iche nsogbu ụfọdụ. Ọtụtụ n'ime ndị bụ nsogbu na-ezighi ezi paswọọdụ. Ọ dị mfe idozi. Maka ime nke a, usoro ahụ nwere usoro ndị a dị mfe.
Gaa na akaụntụ nke abụọ ma ọ bụ azụmaahịa gị na Instagram.
Kpatụ ntọala ahụ
Pịa na nchekwa ahụ
Kpatụ ‘Mepụta paswọọdụ maka akaụntụ a’
Nye okwuntughe na akaụntụ ahụ.
Ugbu a jiri nzere ndị a jikọọ na Instagram site na TikTok. Ya mere, otu a bụ otu esi ejikọ Instagram na TikTok site na azụmahịa ma ọ bụ akaụntụ Instagram nke abụọ.
N’ihi ihe ọ bụla ịchọrọ iwepu ihe ndekọ abụọ ahụ gịnị ka i kwesịrị ime? N'okwu a, ị ga-emeghachi usoro edere na nke mbụ.
N'ebe a, ịpị nhọrọ “Tinye Instagram”. Will ga enweta pịa "Kwụsị" bọtịnụ. Mgbe ahụ ngwa TikTok ga-ehichapụ nkọwa Instagram gị na-akpaghị aka.
Yabụ site n'iji usoro ndị a otu esi etinye Instagram na Tik Tok na-aghọ ọrụ dị mfe. Mee ugbu a ma mee ka ndụ gị dị mfe.
Kedu ka m ga - esi tinye Instagram m na TikTok m
Etu esi tinye Insta na Tik Tok
Etu esi etinye Akaụntụ Azụmaahịa Instagram na TikTok
Etu esi tinye Instagram na TikTok